I-Irota EcoLodge Lower House - I-Airbnb
I-Irota EcoLodge Lower House
Izakhiwo zase-Irota EcoLodge ziqukethe izindlu zeholide ezintathu ezivulekile, zikanokusho futhi ezinakho konke okudingekayo kanye nendawo yokubhukuda yemvelo ehlanganyelwayo (usayizi we-6x16m).
Indlu ngayinye (m2 m2) inesitayela sayo: Indlu Ephansi iwuhlobo lwasemaphandleni, luhlobo lwasemaphandleni, i-Middle House inomuzwa we-retro, wama-1960s, kuyilapho i-Upper House inokwakheka okuhle nesimanje. Njengoba ikhishi lakho elikhulu elinakho konke lisikisela, i-villa yakho iklanyelwe ukuziphekela.
Ungena ehholo lokungena ebhentshini le-antique, bese uya egumbini elikhulu lokuphumula eline-fireplace yalo enkulu, udonga lwayo lwengilazi olubheke ithala nekhishi lalo elivulekile, konke okuklanywe ngemibala efudumele, ebomvu. Ifenisha yenkathi yonke ithengwe futhi yalungiswa endaweni, kuyilapho ikhishi linakho konke okudingayo ukuze wenze isidlo esilula - noma esicaciswe kakhulu. Ukusuka lapha, uthola kokubili amagumbi okulala asezansi, ngalinye linegumbi lalo lokugezela kanye namathawula amadala. Igumbi lokugezela elilodwa linobhavu, kuyilapho igumbi lokugezela elinesihlalo sabakhubazekile lineshawa. Kuwo womabili amakamelo okulala unokufinyelela okuqondile kwi-terrace, nokuyinto eholela otshanini nasechibini. Kusuka egumbini lokuphumula, izitebhisi zokhuni ziholela ekhoneni lokufunda elithokomele nekamelo lokulala elingasetshenziswa. Wonke amakamelo okulala amathathu anemibhede emibili, engasetshenziswa njengemibhede elala umuntu oyedwa noma eguqulwe ibe imibhede elala abantu ababili, ngokuvumelana nezifiso zakho. Ekamelweni lezinsiza uzothola umshini wokuwasha, i-vacuum cleaner nezinye izinto ngenjongo yokunakekela indlu nsuku zonke.
Ithala linetafula langaphandle elithokomele elinezihlalo ezingu-6 futhi liziqhayisa ngombhede wokuphumula, ozothola izembozo ezinethezekile endlini. Kusuka engadini, i-boardwalk yakho yangasese izokuyisa echibini lokubhukuda. Eceleni komnyango wangemuva, kunezindawo zokupheka zangaphandle eziseduze nawe: i-grill nesitofu sokokuzithokozisa okubalulekile kwase-Hungary: i- ‘bogrács' (i-kettle) esetshenziselwa ukuzenzela i-goulash yakho.
Ubuhle bemvelo besifunda se-Cserehát, i-Irota ebizwa ngokuthi isango, itholakala eningizimu yomngcele we-Hungary-Slovak futhi ichazwa yimifula ye-Sajó, i-Bódva ne-Hernád. Uma kuqhathaniswa ne-rougher, uhlangothi lwe-Slovakia lwendawo i-Cserehát ayimangalisi futhi imbozwe yihlathi. Iphinde ibe nezilwane zasendle ezichumayo. Izivakashi zizobona izimpungushe eziningi nama-deer. Ama-boars asendle avame ukungabonakali kangako, kodwa futhi akhona ngamanani amakhulu. Amagquma angamamitha angu-250 kuya kwangu-300 ukuphakama ngokwesilinganiso. Le ndawo ithandwa abaqwali bezintaba, abagibeli bamabhayisekili, abadobi kanye nabazingeli, kuyilapho izinhlobo ezinkulu zezinyoni zenza i-Cserehát ibe indawo enhle yokuvakashelwa.
Eduze ngu-Edelény, oqhele ngamakhilomitha angu-20 ukusuka e-Irota. Leli dolobha elincane lihle ikakhulukazi ekuthengeni kwansuku zonke, kodwa futhi liziqhayisa nge-L 'Huillier-Coburg Palace esanda kulungiswa ngokuphelele. Ibhayisikobho yezingubo zokugqoka ku-3D ngaphambi kohambo ingesi-Hungary kuphela, kodwa ezuzisa kakhulu.
Indawo yokulondoloza imvelo kanye ne-UNESCO World Heritage Site, i-Agtelek National Park ikude ngemizuzu engu-30 ngemoto futhi idume ngokukhethekile nge-Baradla Cave yayo, uhlelo olungaphansi komhlaba lwamakhilomitha angu-26 lwemihume ye-stalagmite. Ukuvakasha kuqala ezinhlangothini zombili emizaneni yase-Agtelek nase-Jósvafő ngokulandelana. Siyajabula ukukusiza ngemininingwane nokwenza ukubhukha.
I-Miskolc nezakhamuzi zayo zase-Hungary iyidolobha lesithathu lase-Hungary ngemva kwe-Budapest ne-Debrecen. Ngisho naphezu komgwaqo wayo omuhle wabahamba ngezinyawo, idolobha ngokwalo, ngeshwa alinakubizwa ngokuthi lihle. Kodwa-ke, kunezizathu zokuvakasha: ngokwesibonelo, inqaba ye-Diósgyőr manje elungisiwe engaphandle kwedolobha iyayifanelekela inkinga, ikakhulukazi njengoba ibungaza njalo imidlalo yaseshashalazini nemikhosi. Idolobha le-resort lase-Miskolctapolca, manje eliyingxenye ye-Miskolc, liyikhaya elidumile lokugeza emhumeni (Barlangfürdő), lapho isivakashi salezi zindlu zokugeza ezishisayo singabhukuda khona ngesistimu yomhume. E-Miskolctapolca ungase futhi uthathe umkhondo we-bobsleigh noma uhambe nge-inthanethi epaki le-Avalon. E-Varbó, ezansi kwe-Bük Mountains, ungathatha uhambo lwe-Segway nomqondisi, kusuka engxenyeni yehora kuya emahoreni amabili. Ihhotela Lesigodlo Elihlaba umxhwele e-Lillafüred nalo liyatuswa, ngokwengxenye ngenxa yokugibela okuhlaba umxhwele nesitimela esincane sasehlathini esikuyisa lapho, kodwa futhi ngenxa yokuthi indawo yokudlela ye- ‘Végállomás' endaweni yokuhamba yesitimela. Imakethe enkulu futhi enakho konke maphakathi ne-Búza tér (wheat Square) ilungele kakhulu ukuthenga ukudla okusha. I-Miskolc ingafinyelelwa ngemoto isuka e-Irota emizuzwini engu-45.
Inombolo yepholisi: EG21007644